သင့်ကလေးငယ် ကျောင်းသွားတဲ့အခါ ထမင်းဘူးနဲ့အတူဘာစားစရာတွေထည့်ပေးကြမလဲ? – My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
အခုဆိုရင် နွေဥတုအကုန်မို့ မိုးတွင်းကိုကူးပြီဆိုတဲ့အခါ ကျောင်းဖွင့်ရာသီကိုရောက်ရှိလာတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့ကြောင့်မေမေတို့အနေနဲ့ သားသားမီးမီးတို့ကို နေ့ခင်းဘက်ကိုအိမ်မှာပဲ ထမင်းဟင်းနဲ့ မုန့်ပဲသွားရည်စာတွေကျွေးနေရင်းကနေ ထမင်းဘူးနဲ့ မုန့်ဘူးထည့်ပေးရတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် သားသားမီးမီးတို့အတွက် သင့်တော်ရာ နေ့ခင်းနေ့လည်သွားရည်စာတွေကိုရွေးချယ်တင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။
ထမင်းဘူးဘေးက မုန့်ဘူးလေး ဘာတွေရွေးပြီးထည့်ကြမလဲ?
ရာသီအလိုက် စတော်ဘယ်ရီ၊ လိမ္မော်သီး၊ စပျစ်သီး၊ ငှက်ပျောသီး အစရှိတဲ့ အသီးအနှံလတ်လတ်ဆတ်ဆတ်တွေဟာ ဗီတာမင်များစွာပါဝင်တဲ့အတွက် ကလေးငယ်ကိုကိုယ်ခံအားတက်စေပါတယ်။
သန့်ရှင်းစွာပြုလုပ်ထားတဲ့မြန်မာမုန့်တွေဟာ အရသာလဲရှိ အားအင်လည်းဖြစ်စေတာမို့ ကလေးငယ်တွေအတွက်သင့်တော်တဲ့ သွားရည်စာတစ်မျိုးတစ်ဖုံအနေနဲ့ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။
နွားနို့၊ ပဲနို့ နှင့် ဒိန်ချဉ်
နို့နှင့် နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေဟာ ကယ်လစီယမ်ဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့အတွက်ကြောင့် ကလေးတွေရဲ့အရိုးကိုသန်မာစေပြီး အရပ်ရှည်မှုကိုအားပေးပါတယ်။
ပေါင်မုန့်၊ ဆင်းဒဝစ်၊ နှင့် ဂျုံမှလုပ်သောမုန့်အမျိုးမျိုး
ပေါင်မုန့်ဟာ အာဟာရကြွယ်ဝတဲ့အစားအစာဖြစ်ပြီး ကလေးငယ်အတွက် အားအင်ဖြစ်စေတာကြောင့် အသားညှပ်၍ဖြစ်စေ၊ ယိုသုတ်၍ဖြစ်စေ၊ သူ့ချည်းဖြစ်စေ ကျွေးနိုင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးမပါမဖြစ်ကတော့ ရေဘူးတစ်ဘူးပါပဲ။ ဘယ်လောက်ပဲအစားတွေစားပါစေ ကလေးငယ်အတွက် သောက်စရာရေတစ်ဘူး
ပါရပါမယ်။ခန္ဓာကိုယ်နှအဆိပ်အတောက်တွေကို ဆီးအဖြစ်စွန့်ထုတ်ဖယ်ရှားဖို့ဖြစ်စေ၊ လန်းဆန်းတက်ကြွဖို့အတွက်ပဲဖြစ်စေတစ်နေ့တာ
အထူးသဖြင့် ခွန်အားဖြည့်အချိုရည်များ၊ အဆီအနှစ်ဖြင့်ဖျော်သောအချိုရည်များဟာ သကြားလွန်ကဲစွာပါဝင်ခြင်း၊ ကလေးများနှင့်မသင့်တော်သောဓာတ်များပါဝင်ခြင်းတို့ကြောင့် ရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ်။
အချိုခဲ၊ အချိုတောင့်၊ သကြားလုံး၊ ချောကလက်
ဒီစားစရာတွေဟာ အချိုပါဝင်မှုများပြီး ကလေးကိုသွားပိုးစားစေနိုင်တာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
စပျစ်သီးခြောက်၊ ဇီးထုပ်၊ အချဉ်ပြားများ
ကြာရှည်အထားခံ ဓာတုပစ္စည်းများဖြင့် စီမံထားတဲ့အစားအစာများကို ကလေးများနးမစားသုံးမိအောင် ဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်။
အမှည့်လွန်အသီးအနှံများ၊ ဆီများသော အီသောအစားအစာများ၊ အချဉ်ရည်နှင့်တို့စားရသောအစားအစာများ ကိုလည်း မိုးရာသီမှာ ဝမ်းရောဂါဖြစ်လွယ်တဲ့အတွက် ဂရုစိုက်ဆင်ခြင်ပြီး ရှောင်ကျဉ်ကျွေးသင့်ပါတယ်လို့ တင်ပြလိုက်ပါရစေ။
May 31st, 2018|Categories: All Articles,